En vente actuellement 30/11/2018
Very 500gr isan’andro, toa an’i Beyoncé… Citron sy tantely no tsiambaratelony!
Taorian’ny fiterahany dia nigagan’ny olona mihitsy ny niverenan’ny bikan’i Beyonce ho toy ny taloha. Tao anatin’ny fotoana fohy monja anefa izany.
1. Nandeha ny sion-dresaka fa nisaraka i Rihanna sy ilay olon-tiany miliaridera, Hassan Jameel.
Ny talata lasa teo nefa no nahitana azy ireo niara-nisakafo tao amin’ny hotely Giorgio Baldi ao Santa Monica, any Kalifornia. Miezaka miafina ireo mpanenjika vaovao mihitsy izy roa ireto ka efa elaela tsy nahitana azy ireo niaraka. Izany no nahatonga ny tsaho hiely fa nisaraka angamba izy ireo.
Tena tia izy fa tsy sahy miteny, ireto no porofo…
Noho ny lehilahy indraindray mafy vava sy tsy tsy dia mahay maneho fihetseham-po loatra amin’ny alalan’ny teny, dia mety hisalasala isika, raha tena tia marina ilay olona iarahana, na tsia. Azo aseho amin’ny fomba hafa anefa ny fitiavana. Ireto misy porofo 7 ahafahana matoky ny fitiavany.
Esquimaux amin’ny manga sy yaourt, mora atao !
Akora ilaina · Yaourt nature 1 · Yaourt vanille mamy 2 · Manga masaka sy vaventy tsara 5 · Tantely ½ kaopy na siramamy · Akondro 2
1. Veste blazer – 70.000Ar sur commande « Francky Blazer » Cont : 033 05 284 45 2. Espadrille – 75.000Ar sur commande Facebook « Taly Talie »
5 taona lasa izay, niaraka tamin’olona aho. Efa nisaraka izahay ary efa samy manambady, nefa tsy mety adinoko izy. Ampio aho.
Rariny loatra raha tsy adino ary tsy ho adino mandrakizay ny olona nifampizara fitiavana tamin’ny tena.
Ireo fianjaika azo alain-tahaka mandritra ny herinandro
Efa karazana adidin’ny vehivavy mihitsy ny manao izay hahamety sy hahamendrika paozy isan’andro. Manahirana ihany anefa indraindray ny misafidy ny akanjo hanaovana. Mba tsy handaniana fotoana ela amin’izany ary dia ireto misy soso-kevitra fiakanjo mandritra ny herinandro.
Mieux vaut une amère vérité qu’un doux mensonge. (Proverbe russe)
Misy fomba fiteny iray izay manao hoe : ny marina rehetra tsy filaza avokoa. Mety misy tranga tokoa angamba mahamarina izany, fa saingy amin’ny fiainana amin’ny ankapobeny, ary raha mbola azo atao koa, dia tsara foana ny milaza ny marina.
Toerana fialam-boly ho an’ny ankizikely, amin’ny faran’ny herinandro
Rehefa faran’ny herinandro tahaka izao dia betsaka ireo tia mivoaka
Ny atao mba ho toy ny vaovao hatrany ny mofo dipaina
Raha tsy hay ny mitahiry ny mofo dipaina, dia mety ho lasa mafy loatra izy na halemy loatra ihany koa. Mba hitahirizana azy toy ny vaovao hatrany dia azo arahina ireto paipaika ireto.
Le Louvre Antaninarenina : wine & cheese & jazz miaraka amin’i Sandrine Rafaofetra sy Joro Rakotozafiarison ary Rado Ramanantsoa manomboka amin’ny 7 ora sy sasany hariva
Ny atao mba hampatsiro ny sakafo tsy misy sira
Noho ny antony samy hafa dia mety tsy hahazo hihinan-tsira ny olona iray. Isan’izany ireo manana olana amin’ny fiakaran’ny tosi-drà, ireo tratran’ny “retention d’eau” ka iangonan’ny rano ny vatany…